Kedu ihe bụ CPM | Ozi ECommerce
Ọ bụrụ na ị nwere eCommerce ma ọ bụ na-eche echiche ịtọlite ​​​​otu, ihe nwere ike ịbụ na ị nụla ọtụtụ ihe gbasara SEO, SEM, ọnọdụ ... Ma, gịnị banyere CPM? Ị maara ihe CPM bụ?
Acronym maka «Ọnụ otu mile", na Spanish"Ọnụ otu puku»Mmetụta bụ otu n'ime ihe ndị kasị sie ike nghọta, ma ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ụdị ugwo maka mgbasa ozi na Ịntanetị na ịmara ihe ha na-ekwu bụ ihe dị oké mkpa. Ya mere, ebe a anyị na-agbalị inyere gị aka ịghọta ya.
1 Kedu ihe bụ CPM
1.1 CPM, CPA, CPT na CPC
1.2 Kedu ihe bụ CPM maka?
2 Otu esi agbakọ CPM
3 Ego ole
4 Ndụmọdụ maka itinye ego na ihe nlereanya a
Dịka anyị kọwara na mbụ. CPM, ma ọ bụ Ọnụ kwa puku, pụtara na ọ bụ ụdị mgbasa ozi nke mmadụ, ụlọ ọrụ, ika, wdg. na-akwụ ụgwọ oge ọ bụla egosiri mgbasa ozi ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị nwere ọnụ ahịa kwa puku ihe ngosi 20 euro. Ọ pụtara na ị ga-akwụ euro 20 maka nlele puku ọ bụla. Mgbe m nwere ha, ị ga-akwụ. Ọ bụrụ na ọ bịaghị, ị gaghị akwụ ụgwọ.
Ugbu a, ihe nlere anya dị ezigbo mma. Maka eCommerce ọ ga-abụ ụzọ iji mee ka a mara onwe gị, mana ọ bara uru? Cheedị echiche ihe na-esonụ. Ị nọ na Facebook ma hụ mgbasa ozi maka ụlọ ahịa. Na nke ọzọ. Ma ọzọ ... Ị na-enyekarị mgbasa ozi ndị ahụ niile? Ihe kasị dịrị nchebe bụ na mba, ya bụ, n'agbanyeghị otú "ọha" na CPM n'ịwa, na okwu nke echiche ma ọ bụ echiche, eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ dịghị mechaa "ịkọ" ọha na eze, ọ gaghị emetụta azụmahịa .
CPM, CPA, CPT na CPC
Anyị arabeghị ara, n'ebe dị anya na ya. Mana ọ bụ na mgbakwunye na CPM enwere ọtụtụ okwu ndị ọzọ ị ga-amata ebe ọ bụ na ha niile metụtara ibe ha. Kpọtụrụ:
TPC: Ọnụ otu puku. N'ezie, ọ bụ otu ihe ahụ ka CPM, naanị ya nwere ike ịkpọ ya otu a.
CPA: Ọnụ otu omume.
CPC: Ọnụ otu ọpịpị.
Onye ọ bụla n'ime ha nwere ọrụ dị iche iche, a na-akwụkwa ya dị iche iche. Ọ bụrụ na CPM bụ ihe na-efu gị x ego kwa puku echiche, n'ihe banyere CPC ọnụ ahịa ga-abụ maka pịa ọ bụla ha na-enye, ma ọ bụ CPA maka ihe ọ bụla ha na-eme.
N'ime ha niile, ikekwe CPM na CPC bụ ndị kacha nwee njikọ, ọ bụ ezie na ị ghọtara na ha bụ ihe abụọ dị iche iche.
Kedu ihe bụ CPM maka?
N'ikwu ihe niile dị n'elu, ị nwere ike na-eche ugbu a na ọ baghị uru, na ọ ka mma itinye ego na ihe ọzọ. ma ọ bụghị otú ahụ n'ezie. Ebumnobi nke CPM bụ inweta ọmarịcha echiche gbasara mgbasa ozi ahụ. Ya bụ, nweta mgbasa ozi, na ndị mmadụ na-ahụ gị, mara gị na, na-atụ anya, na ha na-enye mgbasa ozi ka ha gaa na ibe gị.
Ọ bara uru? Ee na mba. Anyị na-akọwara gị ya. CPM na-erite uru n'ihi na ọ na-enyere gị aka ịbawanye ọnụnọ gị na ịntanetị. Maka ụlọ ahịa ọhụrụ, maka ika ma ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ, ọ nwere ike ịbụ ọrụ zuru oke n'ihi na ị ga-erute ndị na-ege ntị. Ugbu a, ọ naghị enweta uru n'ihi na ọ naghị eme ka obi sie gị ike ọnụọgụ x nke nleta na weebụsaịtị gị. Lee, ị ga-aga chioma ntakịrị; na ha nwere mmasị na mgbasa ozi ma ọ bụ ihe ha na-ahụ (karịsịa ọnụahịa ma ọ bụ ihe ọhụrụ) yana na ha pịa eCommerce gị.
N'ihe gbasara ụlọ ahịa ndị ọzọ guzosiri ike, nnukwu ma ọ bụ ụlọ ahịa a ma ama, nke a adịghị arụ ọrụ. Onye ọ bụla amaralarị ya, yabụ gịnị kpatara eji ya?
Otu esi agbakọ CPM
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ okwu ndị ọzọ, CPM nwekwara usoro a ga-eji gbakọọ ya. Ị chọrọ ịma ihe ọ bụ? N'ụzọ bụ isi, anyị na-ekwu maka ikesa ihe ọ ga-efu iji tinye mgbasa ozi ahụ site n'ọnụọgụgụ nke mgbasa ozi ahụ, mgbe niile na ọnụọgụ puku kwuru puku.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, usoro ga-abụ:
CPM = Ngụkọta ọnụ ahịa / (nlele / 1000)
Nọmalị, ndị Nkezi CPM na-adịkarị n'etiti euro 5 na 50. Kedu ihe kpatara ntutu isi ji buru ibu? Ọfọn, n'ihi na ọ dabere na ngalaba ebe ịchọrọ itinye mgbasa ozi, na nkewa, na asọmpi nke dị maka saịtị ahụ, wdg. Ihe a niile na-eme ka ọnụ ahịa dị elu na-arị elu ma ọ bụ ala.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị kwesịrị iburu n'uche na ihe nlereanya a bụ nke a na-ejikarị eme ihe maka mgbasa ozi njirimara, akara, wdg. ma ọ bụghị ntụgharị, n'ihi na ị pụghị ijide n'aka na a ga-enwe clicks (ọ bụ ezie na nke a na-adaberekarị n'ụdị mgbasa ozi na otú ị si dị mma na ijide ndị mmadụ).
Ndụmọdụ maka itinye ego na ihe nlereanya a
Tupu ịmalite njem ahụ na itinye ego maka azụmahịa gị na CPM enwere ụfọdụ ndụmọdụ anyị chọrọ ịhapụ gị yana ị kwesịrị ịgụ. Mgbe ụfọdụ, CPM, dị ka anyị hụworo, ọ bụghị nke kacha kwesị ekwesị dabere na ebumnobi anyị chọrọ imezu, ya mere ọ dị mkpa iburu n'uche na:
CPM bụ n'ezie ụdị mgbasa ozi ziri ezi. Ọ bụrụ na ị maghị ma ọ bụrụ na ọ bụ nke ziri ezi, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịjụ onye na-ahụ maka ịzụ ahịa ma ọ bụ onye na-enye ndụmọdụ atụmatụ dijitalụ nke nwere ike nyochaa azụmahịa gị, mara ebe ọ dị, hụ adịghị ike na nzọ na imeziwanye site na iji nke kachasị dị irè na nke kwesịrị ekwesị. akụrụngwa.
Mara ebe mgbasa ozi ga-abụ. Were ya na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ CPM na ibe ma ọ bụrụ na mgbasa ozi dị na njedebe nke ihe niile ebe a na-ahụghị ya. O doro anya na ịnweta mmetụta nwere ike nweta, ee, ma ọ gaghị ahụ ya, ma ọ bụrụ na onye na-agụ ahụghị ozi ahụ, mgbasa ozi ahụ, ọ dị ka ọ dịghị.
Ị ga-ahọrọ nke ọma ibe ebe ị ga-etinye mgbasa ozi CPMDịka ọmụmaatụ, na ọ kwadoro ya nke ọma, na ọ nweghị nsogbu na Google, ma ọ bụ na ọ na-adịghị mma, na "amachibidoro ya", ma ọ bụ na ọ dị njọ maka weebụsaịtị gị.
Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị họrọ maka ihe nlereanya a, ị ga-ewu mgbasa ozi dị mfe, na-adọrọ adọrọ, dị mfe icheta na mmetụta ahụ. Ọ dịghị mfe dị ka i chere, ma ị ga-agbalịsi ike dozie ihe oyiyi ahụ na ederede ma mee ka ọ bụrụ ihe, mgbe ị na-ahụ ya, ị gaghị esi na ya pụọ.
Ugbu a ị maara ntakịrị ihe gbasara CPM, ọ bụ naanị ntọala. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ nzọ na ụdị mgbasa ozi na mgbasa ozi a, ndụmọdụ anyị kacha mma bụ ịnọgide na-enyocha okwu a na ịnweta ndụmọdụ iji bulie ego gị na nsonaazụ ị tụrụ anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ihe bụ CPM